Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny loka Nobel farany - TELES RELAY
Tamin'ity taona ity, ny loka Nobel ho an'ny fandriam-pahalemana dia nomena ny United Nations World Programme (WFP), nidera ny ezaka nataony hiadiana amin'ny hanoanana eto an-tany.
Nidera ny sampan'ny Firenena Mikambana noho ny "fanatsarana ny fepetra hisian'ny fandriam-pahalemana" sy ny fisorohana ny fampiasana ny hanoanana ho fitaovam-piadiana.
Nanambara ny Komitin'ny Nobel fa ny asan'ny WFP dia "orinasa iray izay tokony ho azon'ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao atao ny manohana sy manohana".
Ity no tokony ho fantatrao.
Ahoana, nahoana ary oviana no namoronana azy?
Niorina tamin'ny 1961, WFP dia manome fanampiana ara-tsakafo ho an'ireo vondrom-piarahamonina marefo, indrindra ireo tratry ny ady.
Noforonina tamin'ny fangatahan'ny fitantanan'ny filoham-pirenena amerikana Dwight D. Eisenhower hanome fanampiana ara-tsakafo amin'ny alàlan'ny rafitry ny Firenena Mikambana, izay mbola tany am-piandohana.
legendNy Lehiben'ny WFP amin'izao fotoana izao David Beasley dia nidera ireo mpiasa izay "nametraka ny ainy isan'andro isan'andro"
Ny programa dia efa namaly ny tranga maika eran'izao tontolo izao. Tamin'ny taon-dasa fotsiny, nilaza ny WFP fa nanampy olona 97 tapitrisa tamin'ny firenena 88 izy io.
Ny governemanta no loharanom-bola lehibe indrindra - ny fanomezana lehibe indrindra avy any Etazonia, Alemana ary Fanjakana Mitambatra. Ny vola dia natolotry ny orinasa sy ny olona ihany koa amin'ny WFP.
Inona no ataony any an-tsaha?
Ny tanjona faratampon'ny programa dia ny fanamafisana ny fandriampahalemana sy ny fitoniana amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fiantohana ara-tsakafo sy ny fanatsarana ny fanjarian-tsakafo.
Ho amin'izany, ny WFP dia mandray anjara amina tetik'asa marobe, ao anatin'izany ny tetik'asa entina hanamafisana ireo rojom-bary ara-tsakafo, tsena eo an-toerana ary ny fiaretana amin'ny loza ateraky ny toetr'andro.
Ny roa amin'ireo faritra iasan'ny asany ankehitriny dia:
Ny WFP dia mamelona olona 13 tapitrisa - efa ho ny antsasaky ny mponina ao Yemen - satria miady amin'ny ady an-trano sy ny fahantrana manjaka ity firenena ity
Legend ny fampahalalam-baovaoKrizy any Yemen: hanoanana dimy taona, ady dimy taona
Sakana ny fotodrafitrasa tsy dia tsara, ny fanapahana famatsiam-bola, ny fidirana voafetra ary ny tsy fisian'ny fiaraha-miasa iraisampirenena
Tamin'ny volana aprily, nanambara ny WFP fa misy ny mpamatsy vola nijanona tamin'ny fanampiana, noho ny tahotra sao ho voasakantsakana ny fandefasana.
Nilaza izy fa mila maika mihoatra ny $ 500 tapitrisa ($ 385 tapitrisa) mba hiantohana ny fanampiana ara-tsakafo tsy tapaka mandra-pahatongan'ny martsa 2021
Hatramin'ny nahazoany fahaleovan-tena tamin'i Sodana tamin'ny 2011, ny faritra sasany ao Sodàna atsimo dia tratry ny hanoanana sy ny fahantrana, atosiky ny herisetra eo amin'ny foko
Nilaza ny WFP fa efa ho fito tapitrisa ny olona - 60% ny mponina - no miady mafy hahita sakafo hohanina isan'andro
legendAny Sodana atsimo, tanety midadasika manakaiky an'i Neily no tototry ny tondra-drano matetika
Manome fanampiana ara-tsakafo ho an'ny olona antsasaky ny tapitrisa ny WFP, fanampiana vola, sakafo any an-tsekoly ary fitsaboana tsy fahampian-tsakafo
Nilaza izy fa mila $ 596 tapitrisa mba hiantohana ny fanampiana ara-tsakafo tsy tapaka mandra-pahatongan'ny volana martsa amin'ny taona ho avy
Matthew Hollingworth, talen'ny firenena ao amin'ny vondrona, dia nilaza tamin'ny BBC fa ny fidangan'ny vidim-bola sy ny vidin-tsakafo dia mitohy miteraka fahasahiranana, saingy nampihena ny fiankinan-doha amin'ny fanohanana ivelany ny WFP fitoniana ao amin'ny faritra.
Inona ireo olana hafa atrehiny?
Na eo aza ny fahombiazany, ny fanapahana vola dia voaporofo ho sakana amin'ny asan'ny WFP amin'ny faritra maro manerantany.
Avy eo dia misy ny Covid-19.
Tany am-piandohan'ity taona ity dia nampitandrina izy fa ny areti-mifindra coronavirus dia mety hiteraka mosary miely "amin'ny haben'ny Baiboly".
Ny valan'aretina manerantany dia efa nanakana ny fahafahany miasa malalaka manerantany, satria manidy ny sisintaniny ireo firenena hanakanana ny fihanaky ny viriosy.
Misy koa ny fitsikerana?
Na eo aza ny loka farany azony avy amin'ny Komitin'ny Loka Nobel, dia nisongadina hatrany ny WFP taloha - tsy noho ny antony tsara foana.
Tany am-piandohan'ny tantarany dia nampangaina ho nanohana ny toekaren'i Etazonia tamin'ny fividianana ny vokariny ihany koa ity vondrona ity. Ny WFP dia nanandrana nampifandanja ny fividianana eo an-toerana sy ny fisorohana ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Ny mpahay toekarena sasany, toa an'i Kenyan James Shikwati, dia nilaza ihany koa fa ny WFP dia mahatonga ny firenena sasany hiankina amin'ny fanampiana avy any ivelany.
Ary tamin'ny fanadihadiana anatiny tamin'ny herintaona, mpiasa 28 farafaharatsiny no nilaza fa voaolana na iharan'ny herisetra ara-nofo izy ireo raha niasa tao amin'ny masoivoho. Maherin'ny 640 ny hafa nilaza fa efa niaina na nanatri-maso fanorisorenana ara-nofo.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.bbc.com/news/world-54477214